Socdaal Xalaal ah oo loogu tago Fooriyaha - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada leh ee Muslimiinta
Whistler waxay u dhowdahay Vancouver oo ku taal British Columbia. Ku faanista aagga barafka ugu weyn Waqooyiga Ameerika, Whistler waa barafka barafka xilliga qaboobaha iyo isboortiga dibedda. Magaca rasmiga ah ee degmada waa Degmada Dalxiiska ee Whistler.
Kahor intaanay ciyaartooyda xamuulka iyo kuwa barafleyda ah imaan, Whistler waxay ahayd magaalo jarid ah oo lagu magacaabo Alta Lake. Aagga ayaa caan ku ahaa barafkiisa koox ka mid ah maal-gashadayaashu waxay dejiyeen qorshe lagu dhisayo goob lagu ciyaaro barafka iyadoo la rajeynayo inay soo jiitaan ciyaarihii Olombikada ee Jiilaalkii 1968. Riyadii Olombikada si dhaqso ah umay imaan, laakiin dalxiiskii ugu horreeyay ee lagu ciyaaro barafka ayaa laga furay meesha hadda loo yaqaan 'Creekside area' sanadkii 1967 iyo dalxiis labaad oo laga furay buurta Blackcomb 1980. Intrawest, oo markaas lahaa milkiilaha Blackcomb Mountain, ayaa iibsaday Whistler Mountain 1997kii oo ay ku midoobeen hawlgaladii sidii aag baraf ah oo keliya.
Whistler waxay heshay rabitaankeeda Olombikada 2010, maaddaama ay martigelisay inta badan barafka iyo dhacdooyinka isboortiga ee Olombikada Jiilaalka 2010 iyo dhammaan dhacdooyinka barafka ee 2010 Qaboobaha Paralympics.
Maaha wax la yaab leh meesha loo dalxiis tago, Whistler waxay heshay qaybteeda caddaaladda ee barafka iyo cimilada qabow. Heerkulka jiilaalka celcelis ahaan qiyaastii 0 ° C maalintii iyo -6 ° C habeenki tuulada oo barafku caadi ahaan dhulka yaalo laga bilaabo Diseembar ilaa Abriil. Maalmaha xagaaga waxay noqon karaan kuwo diirran, heerkulkuna gaarayo heerkulka Celsius 20s, laakiin habeennadu waxay u muuqdaan kuwo qabow. Sida kuwa kale ee Mainland Hoose, waxaa jira roobab aad u badan laga bilaabo Nofembar illaa Abriil marka loo eego xilliyada kale ee sannadka.
Whistler wuxuu kuxiranyahay inta kale British Columbia ee ah Wadada weyn ee loo yaqaan Sea To Sky (Wadada 99), waa qurux badan laakiin dabeyl leh, mararka qaarna cidhiidhi ah. Wadada weyn si weyn ayaa loo casriyeeyay oo loo ballaariyay kahor 2010 Olombikada Jiilaalka oo hadda aad uga ammaan badan marka loo eego waagii hore, markii ay lahayd sumcad yar oo khatar ah, laakiin weli waa in taxaddar la muujiyo marka la wado, gaar ahaan xaaladaha jiilaalka. Qaybta ay la socoto Howe Sound ee u dhexeysa Vancouver iyo Squamish ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah jidadka ugu muuqaalka badan ee laga heli karo meel kasta. Waqtiga wadista caadiga ah ee ka timaadda Vancouver waa qiyaastii 2-2.5 saacadood. Waxaa jira dhowr boggaga gawaarida lagu gado oo aad ka heli karto dad kula wadaaga safarka iyo kharashyada. Haddii aad haysatid waqti aad dib ugulaabato wadada dheer ee Vancouver dhanka Dufffey Lake Road ilaa Lillooet & Fraser Canyon: Fantastic Alpine Lakes the "Marble Canyon" yar, Semi-Arid Lillooet - cirbado dhaadheer oo cirbad ah & burushka xikmadda leh: kordhinta Sonorian Desert , iyo hoos webiga Fraser dib ugu noqoshada Main Mainland iyo Vancouver's xeebta galbeed ee Rain Rain Forest.
Khadadka Tababaraha Baasifigga, lacag-la'aan: + 1-888-403-4727. Waxay si toos ah uga socotaa garoonka diyaaradaha ilaa Whistler iyada oo adeegooda YVR - Whistler SkyLynx. Ka soo dagi doonaa hoygaaga Whistler. Waxaa ku jira Wi-Fi iyo qolka dharka lagu maydho. Village Whistler: $ 59 hal wado / $ 108 safar wareeg ah (qaangaar); Hantida Whistler: $ 66.50 hal-waddo / $ 123 safar wareeg ah (qaan-gaar ah). Qiimaha badh ee carruurta. Qiimo dhimis lagu sameeyo dadka deegaanka ah .. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Barafka. Waxay bixisaa Wi-Fi iyo baarka borotiinka oo socda. Laba bixitaan maalintiiba labada jiho. Joojinta Vancouver: Airport (laga bilaabo Whistler kaliya) Broadway & Maple, Comfort Inn Hotel, Canada Place, Hyatt Regency, Comfort Inn North Vancouver; Fooriye: Fiidhi Creekside, Gateway Bas Loop. $ 24 hal-waddo, $ 35 safar wareeg ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baska wareega,, lacag-la'aan: + 1 888 717-6606. Waxay si toos ah uga socotaa garoonka diyaaradaha ilaa Whistler iyada oo adeegooda YVR-Whistler Express. 6 safar maalinle ah jiilaalka. 5 safar maalinle ah waqtiyo kale. Laga soo bilaabo $ 79 hal-dhinac / $ 150 safar wareeg ah (qaan-gaar ah) iyadoo kuxiran goobta hoteelka. $ 55 / $ 110 laga bilaabo magaalada Vancouver .. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gawaarida Epic. Adeegga basaska aan-buuxin laakiin weli wuxuu bixiyaa boorsooyin bilaash ah iyo baaskiil. Joojinta Vancouver: Hyatt Regency Vancouver (sanadka oo dhan); UBC, Sheraton Wall Center, Broadway & Granville (xilliga qaboobaha oo keliya). Fooriye: Gateway Bas Loop $ 24 hal waddo, $ 35 safar wareeg ah qofkiiba. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baska Xisbiga, Isboortiga BC.
Dalxiisyada Landsea & Charters (Vancouver Tours), 680 Industrial Ave. Vancouver, BC, V6A 2P3 (Sidoo kale waad ka qori kartaa iyaga Hotels badan oo Whistler ah),, ✉ reservations@vancouvertours.com.
Goobaha Dalxiiska ee Whistler, +1 604-938-1515, waxay adeeg taksi ka bixisaa Vancouver iyo Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Vancouver ilaa Whistler $ 255.
Ridebooker wuxuu ka shaqeeyaa gawaarida u dhexeeya inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Vancouver iyo Whistler.
Haddii tiro dad ahi wada safrayaan waxaa macquul ah in limo lagu raaco $ 350-400 oo qol loogu talogalay u dhexeeya 6 ilaa 10 qof.
Madaarka ugu weyn ee kuugu dhow waa Madaarka Caalamiga ah ee Vancouver (). Waxaa jira shirkado basas iyo limousine ah oo bixiya adeegga baska tooska ah illaa garoonka diyaaradaha ilaa Whistler. Tigidhada loogu talagalay Snowbus (Xarunta Dalxiiska ee Dalxiiska BC) iyo Khadadka Tababaraha Baasifigga (SkyLynx counter) waxaa laga iibsan karaa hoolka imaatinka. Kirada baabuurta sidoo kale waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha (xilliga qaboobaha, had iyo jeer codso taayirada barafka oo kormeer si aad u xaqiijiso inay rakiban yihiin).
Soo-booqdayaasha ka imanaya Mareykanka ayaa laga yaabaa inay u soo duusho dalka gudihiisa Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma or Gagada Diyaaradaha Caalamiga ee Bellingham iyo qaadashada adeegyada basaska ee xadka si loo helo ikhtiyaar jaban. Safarka basku wuxuu noqon doonaa mid ka sarreysa 5 saacadood. Gawaarida Degdega ah waxay bixisaa adeegyo bas.
Whistler wuxuu leeyahay laba tas-hiilaad hawo oo yaryar - heliport iyo saldhiga badda. Badanaa waxaa loo isticmaalaa indha indheynta laakiin waxay leeyihiin dhowr duulimaad goboleed oo kireysan.
Whistler / Green Lake Aerodrome, 8069 Nicklaus N Blvd (oo ku taal Nicklaus North dhinaceeda koonfureed dhamaadka Green Lake). Harbor Air waxay bixisaa duulimaadyada diyaaradaha badda ee Vancouver iyo Victoria.
Histiga Histler, 9940-9990 Wadada Heliport. Helijet waxay bixisaa adeeg u dhexeeya Whistler iyo Vancouver.
Pemberton, oo 45 daqiiqo woqooyi ka xigta Whistler, sidoo kale waxay leedahay garoon diyaaradeed oo yar (caalami ah) oo leh adeegyo xayeysiis ah.
Magaalada Whistler waxay ku fidsantahay hareeraha dooxada, laakiin wadnaha khibrada Whistler wuxuu diirada saarayaa tuulooyinka u eg qaabka yurub ee laga dhisay agagaarka salka gondolas. Inta badan hoyga, makhaayadaha, baararka, dukaamada iyo Blackcomb iyo Whistler gondolas ayaa ku yaal Tuulada Whistler iyo Tuulada Sare, oo ku taal cagaha Whistler iyo Blackcomb. Village North (Blackcomb Village), oo laga dhisay hareeraha saldhiga hore ee Blackcomb, waa yaryahay laakiin wali waxay leedahay makhaayado iyo hudheelo badan. Whistler Creekside waxaa laga dhisay agagaarka gondola asalka ah dhanka koonfureed ee Whistler Mountain.
Habka ugu fudud ee lagu wareego inta badan Whistler waa cagta. Tuulada Whistler iyo Tuulada Sare inta badan waa socod lugeynaya oo yar yar oo aad ku socon karto meel kasta. Raad-gaaban (5-10 daqiiqo) wuxuu ku xiraa Village North waxaana sidoo kale jira nidaam ballaadhan oo jidad ah oo isku xira tuulada Whistler iyo qaar badan oo ka mid ah jardiinooyin, koorsooyin golf iyo xeebo ku taal qaybaha kale ee dooxada. Gawaarida waxaa sida ugu fiican loo isticmaalaa hadaad isku dayeyso inaad gaarto meelaha ka baxsan. Haddii aad isticmaasho gaari, wadada weyn ee dhex marta magaalada waa Highway 99.
Waxaa ku shaqeeya BC Transit, the Nidaamka Gaadiidka ee Whistler, +1 604 932-4020, waa nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Whistler waxaana loo arkaa mid aad ugu fiican magaalo baaxaddeeda leh. Waxay si joogto ah u socotaa 5:30 AM ilaa 3AM sanadka oo dhan. Adeegyada rakaabka ayaa sidoo kale loo fidiyaa Pemberton iyo Squamish. Qiimaha jaban waa $ 2.50 dadka oo dhan, ama maalin -dhaafka $ 7. Waxaa jira saddex waddo oo ah adeegyo lacag la'aan ah: jidka 4 (jiilaalka), jidka 5 (sannadka oo dhan) iyo jidka 8 (xagaaga). Buug ka kooban toban tigidh oo qaangaar ah ayaa lagu iibsan karaa $ 22.50, ama $ 18 dadka waayeelka ah ee ka weyn 65 sano iyo ardayda ilaa fasalka 12aad, oo laga helo Xarunta Booqdaha iyo goobaha kale ee idman. Wareejin ayaa lagu heli karaa codsi ka yimid darawalka si loogu xiro basaska.
Bilaha xagaaga waxaa jira dhar badan oo kiro ah. Wadada dooxadu waxay isku xirtaa 99% dhammaan aagagga gudaha iyo hareeraha Whistler. Kani waa nidaam raad-raac layn ah oo laami ah oo aad u wanaagsan oo dhakhso leh in lagu wareego. Wadooyin badan oo horumarsan ayaa woqooyi u aada Pemberton iyo koonfur ilaa Squamish kuwa laga yaabo inay noqdaan kuwo xiise badan.
Whistler Taksi + 1 604-932-3333
Goobaha Dalxiiska ee Whistler + 1 604-938-1515
Qaado view buurta dusheeda. The Whistler iyo Blackcomb Gondolas waxay socdaan maalin kasta ku dhowaad sanadka oo dhan (waxay u xiran yihiin dayactirka inta lagu jiro Oktoobar-horraantii Nofeembar). Aragtiyada xagga sare waa kuwo aad u qurux badan. Tigidhada indha indheynta waxay ku kacayaan $ 52.45.
Beerta Gobolka Brandywine Falls, Wadada weyn ee 99 (11km (7 mayl) koonfur ka xigta Whistler). Biyo-dhac biyo ah oo 70m ah iyo waadi dambe oo ku teedsan Brandywine Creek. Laga soo bilaabo goobta gawaarida la dhigto, waa socod lug ah oo daqiiqad ah 10-15 oo loo maro wadiiqo wanaagsan oo loo maro barta daawashada. Nasiib darrose tani ma ahan mid ay heli karaan gaadiidka dadweynaha.
Xarunta Dhaqanka ee 'Squamish Lil'wat', 4584 Blackcomb Way, Whistler, British Columbia, lacag la'aan: + 1 866 441 7522. 9:30 AM–5:00PM, Isniin – Sun. Waxay soo bandhigeysaa farshaxanka, taariikhda iyo dhaqanka Kooxda Koowaad ee 'Squamish and Lil'wat' $ 18.00 (dadka waaweyn); $ 13.50 (ardayda dugsiga sare kadib); $ 5.00 (carruurta da'doodu tahay 6-12 sano iyo ardayda da'doodu tahay 13-18); $ 42.00 (qoyska oo ka kooban laba qof oo waaweyn iyo laba carruur ah). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Whistler, 4333 Main St, Whistler, BC (Maktabadda Dadweynaha ee Whistler). Waxay muujineysaa duurjoogta, taariikhda iyo horumarka Whistler. Sidoo kale waxay muujineysaa horumarka qalabka barafka, tartamada Olombikada, tooshka olombikada, xusuusta Olombikada iyo dhaqdhaqaaqa Olimbikada. Gelitaan bilaash ah, tabarucaad ayaa lagu dhiirigelinayaa .. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baaskiil aad u fiican
Haddii barafka ama fuulitaanka ay tahay waxaaga, way adag tahay in lagu niyad jabo Whistler-Blackcomb, 1-800-766-0449 (bilaash) ama +1 604-904-8134. Iyada oo wiishashka '37 wiish' ka shaqeeya in ka badan 200 oo orodood oo ku yaal laba buurood iyo hoos u dhac joogto ah oo kor u dhaafaya 1,500 oo mitir (5,000 feet), Whistler-Blackcomb ayaa ah goobta ugu weyn ee lagu ciyaaro barafka ee Waqooyiga Ameerika waxayna si joogto ah ugu jirtaa mid ka mid ah saddexda meelood ee barafka ugu sarreeya Waqooyiga Ameerika. Noocyada kala duwan ee dhulku waa kuwo aad u ballaaran - oo ka bilaabma aagagga bilowga ilaa qulqulka iyo geedaha iyo socodka socod baradka ah ee loo maro ilaa fijaannada alpine ee budada ku uruursan ka dib markii uu da'o baraf cusub - markaa waa inay jiraan wax ku habboon qof walba. Dhinaca xorriyadda waxyaabaha, waxay leedahay afar beerood oo dhulka ah, waddo iskutallaab baraf ah iyo superpipe.
Haddii aad ku nooshahay tuulada Whistler ama aad dhigato meelaha maalinlaha ah, meesha ugu dhow ee laga galo labada buurood waa labada gondola ee Skiers Plaza ee tuulada Whistler. Safarku wuxuu qaadanayaa 20-25 daqiiqo safafkuna way dheeraan karaan subaxa hore. Whistler Creekside wuxuu leeyahay gondola soo gala dhinaca koonfur-galbeed ee Whistler Mountain. Tani waa socod dheer oo ka imanaya Tuulada sidaa darteed waxtar ayey leedahay oo keliya haddii aad ku sii nagaato aagga Creekside ama aad baabuur leedahay. Village North waxay leedahay dhowr wiish oo marin u leh Blackcomb Mountain iyo aag bilow ah. Gondolas waxay howl bilaabaan 8:30 AM waxayna istaagaan inta udhaxeysa 3PM ilaa 4PM, waxay kuxirantahay waqtiga sanadka. Xaaladaha barafka waxaa laga heli karaa Taleefanka Barafka oo ah + 1-800-766-0449.
Labada buuroodba waxay furan yihiin dhammaadka wiigga ee Noofambar xilliga ugu weyna wuxuu soconayaa illaa dhammaadka Abriil. Xaaladaha la oggol yahay, dalxiisku wuxuu furi doonaa mid ka mid ah buuraha oo la furi doonaa illaa horraanta Juun ee looga gudbayo barafka. Tigidhada qaangaarka ee wiishka qaangaarka ah waxay ku kacaysaa $ 89 xilliyada ugu sarreysa sanadka (sida caadiga ah inta lagu jiro Kirismaska ​​iyo inta lagu jiro Maarso), oo leh qiimo yar oo ka jaban waqtiyada kale. Tikidhada xagaaga ee barafka ayaa ka jaban $ 47. Tigidhada qaadista sidoo kale waxaa laga heli karaa bakhaarka ku habboon ee loo yaqaan '7-Eleven shop' ee ku yaal Squamish (dhinaca laga soo galo Vancouver), halkaas oo lagu iibiyo qiimo dhimis yar.
Blackcomb Glacier wuxuu furaa dhowr saacadood maalintii laga bilaabo bartamaha Juun ilaa horraanta Ogosto, laakiin waxaa jira dhowr socod oo badan maadaama inta badan loo isticmaalo barafka xagaaga iyo kaararka barafka.
Socdaalka Alpine wuu ku farxaa
Difaaca barafka iyo ciyaaraha barafka caan ku yihiin Whistler sidoo kale. Waxaa jira baraf baraf ah oo ku wareegsan Lost Lake, oo ay ku jiraan barafka habeenkii haddii xaaladuhu sax yihiin, iyo Backcountry Skiing oo ku yaal dooxada oo dhan, gaar ahaan dusha sare ee Whistler iyo Blackcomb. Dooxada Callaghan waxay dhanka koonfureed kaga beegan tahay Whistler (bidix u leexo kahor Howlgalka Isgoyska) waxayna martigalin doontaa dhacdooyinka Nordic Skiing ee loogu talagalay Olombikada Jiilaalka ee 2010. Callaghan Country waxay martigalisaa dalxiis barafka, kabaha barafka, iyo dalxiis baraf baraf ah oo kuyaal gobolkan. Heliskiing waa dadaal qaali ah laakiin qiimo leh haddii aad jeceshahay inaad sameyso raadad halka kuwa kale ay ku yar yihiin. Dhowr hawlwadeenno ayaa u sameeya Whistler mayladeeda dhul-badeedka gadaashiisa ay heli karaan martida.
Beerta Baaskiilka Baaskiilka, marin looga helo Skiers Plaza,, lacag-la'aan: + 1-866-218-9690. 10AM - 5PM maalin kasta bartamihii Maajo ilaa bartamihii Oktoobar. Fur ilaa 8PM inta lagu jiro xagaaga. Xilliga kuleylaha, janada barafka waxaa loo rogaa janada rookaha oo leh wiish fara badan oo wata mooto iyo baaskiil buurta korkeeda. Waxaa jira in kabadan 50 orod iyo 4,900 cagood oo ah adeegid toosan dhammaan heerarka xirfadeed. Raadadka waxaa ka mid ah hal waddo iyo waddooyin orod badan oo orod leh oo leh boodboodyo cajiib ah iyo qaar ka mid ah walxaha Northshore ayaa la dhisay Baaskiiladaha waxaa lagu kireysan karaa saldhiga Whistler gondola. Tigidhada kor u qaad si joogto ah $ 51, $ 44 xilli hore.
Lake Park lumay, damin meel u dhow dhamaadka Blackcomb Way. Lake Lost waa meel fiican oo lagu nasto xagaaga waana goob caan ku ah dadka deegaanka. Waxaa jira xeeb, biyuhu way ka diirran yihiin harooyinka kale ee dooxada ku yaal waxaana jira maylal badan oo waddooyin lug ah ama baaskiil wata. Sidoo kale waa goob caan ku ah barafka barafka ee xilliga qaboobaha.
golf waa wax caan ka ah Whistler waxayna leedahay koorsooyin kala duwan iyo 3 koorsooyin heer sare ah, & laba koorso oo la yaab leh oo ka hooseeya Mount Currie oo ku dhow Pemberton.
Nicklaus North, 8080 Nicklaus North Blvd, lacag la'aan: + 1-800-938-9898.
Chateau Whistler, 4612 Blackcomb Way, lacag la'aan: + 1-877-938-2092, fax: + 1 604 938-0368.
Naadiga Golf Whistler, 4001 Whistler Way, lacag-la'aan: + 1-800-376-1777.
Waxaa jira tiro ka mid ah tug jidadka ku yaal gudaha iyo hareeraha Whistler. Qofka socod baradka ah ee raadinaya socod quruxsan geed dheer oo geedo kedar ah, Cougar Mountain wuxuu bixiyaa wareeg saacad fudud. Rakkoolayaal dagaal badan oo maalinle ah ayaa laga yaabaa inay aadaan Brandywine Meadows, oo safar lix saac ah ugu socda dhul aad u adag. Boorsooyinka maalinlaha ah sidoo kale waxay leeyihiin xulashooyin kaladuwan oo ay kujiraan raadadka Helm Creek ilaa Garibaldi Lake iyo Black Tusk. Dabcan, wiishka barafka iyo gondolas ee Whistler Blackcomb waxay shaqeeyaan xagaaga si ay ugu soo bandhigaan dadka lugeynaya goos gooska gaaban dalka dibadiisa.
Whistler sidoo kale wuxuu bixiyaa xoogaa isboorti wanaagsan iyo trad / gear fuulitaanka dhagax weyn. Xuduudaha magaalada gudaheeda waxaa ku yaal dhowr dhagaxaan oo yaryar, oo iskudhaf ah oo wadar ahaan loo yaqaan Nordic Rock. Aaggu wuxuu bixiyaa 23 dariiq oo toosan, badankoodna isboorti, illaa 20m dheer oo u dhexeysa dhib ka yimid 5.8 - 5.13a (Faransiis: 5 - 7c +). Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan jidadka ku yaal Whistler iyo aagga, hubi mid ka mid ah buugaagta hagidda tayada ee sharraxaya fuulitaanka marinka Badda ilaa Sky.
Waxaa jira shirkado dhowr ah oo ku takhasusay tacabur banaanka safarka sida qulqulka biyaha cad, kalluumeysiga duullimaadka, ATV (dhammaan taraafikada dhulka) safarro, baraf-barafka, xayeysiinta eeyaha iyo noocyo kale oo badan oo waxqabadyo ah. Iyada oo ku xidhan dookhaaga gaarka ah, qaar ama kuwan oo dhami waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan oo guud ahaan xirfad ahaan loo maamulo. Dalxiisayaasha waxaa ka mid ah:
Tilmaamaha Kalluumeysiga Dooxada Ltd., + 1-877-858-7688
Dibedda Kanada, + 1-800-565-8735
Socdaalka Whistler Backcountry Adventure, + 1-888-297-2222
Naadiga Tennis-ka ee Whistler. Qiimayaashu waxay ka bilaabmayaan $ 32 / saac ee maxkamadaha gudaha ilaa $ 16 / saac ee maxkamadaha dibedda.
La Soco Daawashada. Whistler wuxuu caan ku yahay orso madow, iyadoo ilaa 70 tuulo ku nool yihiin. Waxaa lagu arkaa baarkinka buuraha mararka qaarkood. Fursad wanaagsan oo aad ku daawan karto iyaga, safar orso abaabulan ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan. $ 189.
Kuliyadda Caalamiga ah ee Tamwood, 301 - 4204 Fagaaraha Tuulada. Tamwood International waxay ka hawlgashaa dhowr iskuulo luuqadda Ingiriisiga ah oo si taxaddar leh loo qorsheeyey loona maareeyey, barnaamijyo Xero ah iyo barnaamijyo Khibrad shaqo ah oo ku baahsan Kanada.
Sida caadiga u ah tuulooyinka iyo magaalooyinka ku-tiirsan dalxiiska, tuulada Whistler waxay leedahay dukaamo dhowr ah. Guud ahaan, dukaameysiga ayaa kafiican waxaadna kaheli doontaa noocyo badan Vancouver u dhow, marka hadaad miisaaniyad ku jirto, lacagtaadu waxay u sii badan tahay inay sii fogaato Vancouver. Dhanka kale, dukaamo badan oo ku yaal tuulada Whistler ayaa ah wax lagu farxo in la soo booqdo, bannaanka horena wuxuu ka dhigayaa daalacashada (ama adeegashada) mid ka raaxeysan kuwa waaweyn ee laga helo Vancouver.
Bixinta Kireynta Whistler Ski Butlers. Baro barafka ama barafka ama dib u booqo dhaadhaca buuraha Whistler Blackcomb markale qaab ahaan shirkadan adeega kirada qalabka.
Skiis & Biikes, 126 - 4340 Lorimer Road (oo u dhow Nesters). 8 AM-8PM. Dukaanka Baaskiilka Qoyska. Takhasus kale waa ku habboon baaskiil. (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Halkee laga joogaa Whistler
Pemberton waxay ku taalaa 20 daqiiqo waqooyiga Whistler waxayna bixisaa xulashooyin hoyga oo dheeri ah.
Hoyga Fanka, 2113 Nordic Dr. In “Nordic Estates”, oo qiyaastii 4km u jirta tuulada Whistler. Masaafada loo socdo joogsiga baska ee taga tuulada Whistler. Nadaafad, laakiin si yar loo dayactiray marka loo eego qiimaha dhagaxa-hoose. $ 15-25 qolka jiifka.
Martigalinta International Whistler, 1035 Legacy Way (Isgoyskii Hore ee Tuulada Cheakamus ee Ciyaartooydii Hore. Ka soo horjeedka Isgoyska Shaqada). Soo gal: 4 PM-10PM, out-out: 11AM. Xarun weyn, nadiif ah, casri ah ayaa la furay 1-dii Julaay, 2010. Shaqaaluhu waa kuwo aad u saaxiibtinimo leh waxaana jira hawlo maalinle ah oo ay abaabusho hoyga. 20-30min oo ka yimaada Whistler Village Adeegga baska ee joogtada ah iyo soo noqnoqda laga bilaabo 5AM ilaa 3AM. Taksiga laga raaco tuulada waa kudhowaad $ 20 (Codsi Van & faree kala ah 6 siyaabood :)) Qolalka jiifka waxay ka bilowdaan $ 30, Qolalka Gaarka ah waxay ka bilaabaan $ 85 + canshuurta ..
Southside Lodge, 2102 Lake Placid Road (Wadada 99 & Wadada Lake Placid). Waa hagaag oo qiyaastii 300m u jirta saldhigga gondala ee Creekside (Mountain Whistler) iyo aagga ganacsiga. In kasta oo dukaamada iyo maqaayadaha (iyo wiishka wiishka) ay ku jiraan masaafad socod, aagga tuulada ugu weyn waa socod 40 daqiiqo ah, hase yeeshee aagga waxaa ka shaqeeya basas yimaada 15 daqiiqo kasta (xilli sare), ama 30 daqiiqo (xilli hoose). Haddii aad joogtid hoteelkan hubi inaad wax ka cuntid Southside Diner, oo ku taal dabaqa hoose waana mid ka mid ah xarumaha aad ugu yar ee ka haray xilligii kahoreeyay Intrawest Whistler. $ 30- $ 40 qolka hurdada, $ 80 qolka gaarka loo leeyahay. (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Delta Whistler Village Suites, 4308 Main St,, lacag-la'aan: + 1-888-299-3987. Soo gal: 4PM, out-out: 11AM. Delta waxay bixisaa qolal 1 iyo 2 qol jiif ah oo leh kijin buuxa iyo tas-hiilaad dharka lagu dhaqo sida caadiga ah. $ 229 iyo ilaa xilliga ugu sarreeya.
Guryaha Buuraha, 4417 Sundial Pl,, lacag-la'aan: + 1-877-607-3337. Soo gal: 4PM, out-out: 11AM. Hoy leh istuudiyo, dabaqyo, iyo qolal qol jiif ah. Barkad kulul iyo tubbo kulul. Makhaayada Talyaani ee ku taal Trattoria di Umberto. $ 139 iyo wixii ka dambeeyay xilligii ugu sarreeyay. Gawaarida la dhigto waa $ 16 / habeenkii oo dheeraad ah.
Summit Lodge iyo Spa, 4359 Main St, lacag-la'aan: + 1-888-913-8811. Hoteelka Outi ee leh hudheello ku yaal goobta. Waxay leedahay Deluxe iyo Istuudiyaha Fulinta iyo hal qol jiif. $ 200 iyo ilaa xilliga ugu sarreeya.
Hoyga Whistler Peak, 4295 Blackcomb Way,, lacag-la'aan: + 1-866-512-5273. Hoteelku wuxuu ku yaal bartamaha tuulada Whistler. Istuudiyaha iyo qolalka suxuunta leh. $ 200 iyo ilaa xilliga ugu sarreeya. (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Hotelka Sundial Boutique, 4340 Sundial Brescent,, lacag-la'aan: + 1-800-661-2321. Soo gal: 4PM, out-out: 11AM. Hotelka Sundial Boutique wuxuu ku yaal salka Whistler Mountain waana mid ka mid ah guryaha ugu dhow labada dhinac ee Whistler iyo Blackcomb gondolas. Waxaa ku yaal saqafka sare ee dusha sare hoteelka sidoo kale hudheelku wuxuu kaloo leeyahay xulasho qolal leh qolal kulul oo gaar loo leeyahay. $ 300 iyo ilaa xilliga ugu sarreeya.
Afar Xilli Dalxiis Oo Whistler Ah, 4591 Blackcomb Way,, lacag-la'aan: + 1-888-935-2460. Waxay ku taalaa Tuulada Sare, masaafad socod ilaa wiishka Blackcomb Wizard iyo tuulada weyn. $ 395 iyo ilaa xilli sare.
Hilton Whistler Resort & Spa, 4050 Whistler Way,, lacag-la'aan: + 1-800-515-4050. Soo gal: 4PM, out-out: 11AM. Waxay ku taallay tuulada Whistler, Hilton waa hal meel oo dheer oo ka durugsan Whistler gondola. $ 279 iyo kor xilli sare.
Goobta Idylwood, 8725 Idylwood Pl,, lacag-la'aan: + 1-877-932-4582. Soo gal: 4PM, out-out: 11AM. Idylwood Inn waa jaan weyn oo loo qaybiyay laba iyo saddex qol jiif. $ 225- $ 250 oo loogu talagalay 2bdrm iyo $ 475- $ 545 oo loogu talagalay 3bdrm xilliga ugu sarreeya. (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Pan Pacific Whistler Hotel Mountainside, 4320 Sundial Cres,, lacag-la'aan: + 1-888-905-9995. Baasifiga Baasifiga wuxuu ku yaal salka Whistler, dhowr talaabo oo ka socota Blackcomb gondola iyo midigta dhexdeeda ficilka barafka. $ 300 iyo ilaa xilliga ugu sarreeya.
Xeebaha Blackcomb ee ku yaal Whistler (Guryihii hore ee Hoyga ee Marriott - Whistler), 4899 rinjiyeeyay Cliff Road,, bilaash ah: + 1-800-716-6199. Hoteel raaxo leh oo dhan, kuna yaal dhinaca Blackcomb Mountain. Gaaritaanka ka-gudubka ka gudubka barafka. Waxaa ku yaal istuudiyaha, hal iyo laba qol jiif. Waxay leedahay tubbo weyn oo kulul. $ 200 iyo wixii ka dambeeya inta lagu jiro xilliga ugu sarreeya (Feb / Mar). (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Fasaxyada Guriga ee Whistler, 3114 Tyrol Cres,, lacag-la'aan: + 1-888-644-7444 (Waqooyiga Ameerika lacag la’aan), + 1 800 967 997 (bilaash HK), 0800 917 0478 (UK-lacag la'aan). Bixiyaha 2 ilaa 5 qol jiif ah oo kiro ah oo Whistler ah. Waxa kale oo aad ballansan kartaa baakadaha barafka iyo golf-ka. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 795 ilaa $ 1,195.00 / habeenkiiba 4-5 BR kondho ..
Hoyga Whiski Jack Whistler, 4319 Main St,, lacag-la'aan: +1-888-944-7545 ext 1. Qiimaha ugu fiican ee guryaha tayada ugu fiican. Istuudiyaha qaybaha qolalka badan. Cutubyada 17 ka mid ah dhismayaasha ugu fiican Whistler. Qaybo iskood u kooban, qalab dhameystiran leh.
Guryaha Whistler Superior, 4355 Northlands Blvd,, lacag-la'aan: + 1-877-535-8282, fax: + 1 604-932-3517. Noocyo wanaagsan oo kiro ah oo fasax ah si loo waafajiyo baahida dhammaan noocyada safarka. Qiimayaashu way kala duwan yihiin iyadoo ku saleysan taariikhda, laga bilaabo $ 99 / habeen (Studio - garabka xilli) illaa $ 1,500 / habeen (3 - 4 jiifafka raaxada - xilliga qaboobaha).
Goobaha Guryaha, 2036 London Ln,, lacag-la'aan: + 1-800-320-0896, fax: + 1 604-938-9699. Aruurinta barafka-guryaha lagu raaxeysto, guryaha lagu ciyaaro-ka-baxa ee salka Whistler Creekside Gondola. Qiimayaashu way kala duwan yihiin iyadoo ku saleysan taariikhda iyo nooca, laga bilaabo $ 129 (hal qol jiif ah, xilli garabka) illaa $ 1,500 (afar qol jiif raaxo leh, xilliga qaboobaha fasaxa).
Kirada Fasaxyada Acer, 4905 Spearhead Pl,, lacag-la'aan: + 1-877-489-7669. Waxay bixisaa hal, labo, iyo 3 qol jiifka-ka-baxsan ah oo lagu hoydo oo lagu boodboodo oo ku yaal Whistler qoysaska. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 150 ilaa $ 1,057.00 / habeenkiiba 1-3 BR kondho ..
Whistler si layaab leh ayey ugu yartahay meelaha abaabulan ee la dego. Intooda badan kuwa jira ayaa ka baxsan magaalada:
Kaamamka Adeegga Kaymaha ee Cal-Chek. Buundada kaabaska xarkaha qabow ee ka gudubta Wabiga Cheakamus
Isgaarsiinta ee Whistler
Cafe Internetka Internetka, # 6, 4340 Sundial Cres. Furan maalin kasta, xagaaga 9 AM-10:30PM, jiilaal 8 AM-10PM. Isticmaalka internetka ee boosteejada iyo fiilada wireless. Dheeraad ah adeegyada laxiriira sida gubida CD, nuqul koobiyeynta, iyo adeega fakiska. Wicitaanada maxaliga ah ee bilaashka ah ee telefoonka xushmadda leh. Sidoo kale espresso kala duwan iyo cabitaanno qabow, iyo cunto fudud. Raadi 10% kaararka qiimo dhimista ee miiska soo dhaweynta. Waxay ku yaalliin dhinaca midig ee barxadda skier ee labada gondolas, oo ku xigta Black's Pub, oo la dhigay Sundial Hotel. Internetka $ 10 / saac.
Maktabada Dadweynaha ee Whistler, 4329 Main St,, fax: + 1 604-935-8434. M-Th 11 AM-7PP, F-Su 11 AM-5PM, ciidaha xiran. Waxay bixisaa internet bilaash ah, marka lagu daro adeegyada maktabadda caadiga ah. Waxay ku taal dhinaca ka soo horjeedka Village Gate Blvd oo ka timaadda fagaaraha ku yaal salka buurta Whistler.
North on Highway 99 ayaa ku geyn doonta tuulada Pemberton iyo Dooxada Pemberton. Soojiidashada waxaa ka mid ah Nairn Falls, quruxda alpine ee Joffre Lakes Provincial Park iyo tiro ilo dabiici ah oo kulul.
Beerta Gobolka Garibaldi, oo leh fursado badan oo safar iyo safar dibadeed, waxay leedahay marinno woqooyi iyo koonfurta magaalada ka baxsan Highway 99.
Squamish, 45 daqiiqo koonfur ka xigta Whistler on Highway 99, waxay leedahay fuulid dhagaxan, rafting / kayaking, gorgor daawashada, matxafka tareenka iyo hawlo badan oo banaanka ah.
Xeebaha Xeebta Blackcomb ee Hoteelka Whistler
Fulinta Inn ee Tuulada Whistler
Afar Xilli Dalxiis Oo Whistler Ah
Buurta Lodge Whistler
Buuraha Pan Pacific Fooriye
Xarunta Tuulada Pan Pacific
Meelaha loo Dalxiis tago ee loo yaqaan 'Resortquest Rentals At Glacier Lodge'
Meelaha loo Dalxiis tago ee Glacier's Reach Whistler
Kireystayaasha Resortquest ee Suuqa Pavillion Whistler
Meelaha loo Dalxiis tago ee Suuqa Suuqyada ee Whistler
Meelaha loo Dalxiis tago ee Stoney Creek Lagoons Whistler
Resortquest Rentals Ee Stoney Creek Northstar
Kireystayaasha loo Dalxiis tago ee Stoney Creek Sunpath Whistler
Resortquest Rentals ee Marquise Whistler
Resortquest Rentals Ee Whistler Cascade Lodge
Dalxiiska Westin & Spa Whistler
Guriga Whistler Village & Suites
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Kanada > Xalaal Safarka Whistler